Posted by Nyein Chan Aung at 11:29:00 AM2comments
"ဓါးလွတ်ဆွဲပြီးမောင်းပြန်သေနတ်ကို တော်လှန်တဲ့ ဗိုလ်မြတ်ထွန်း"
ငါတို့နိုင်ငံဟာ မိုးပေါ်က ပြုတ်ကျလာတာမဟုတ်
မုံရွာမြို့ကြီး ၀၀လင်လင် ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့
တမာ တဇောင်း သနပ်ခါးပင်နဲ့ ထနောင်း
ချိုးကူသံ ခရာတောနဲ့ သာမောဖွယ်အညာ
ငါတို့ မြေသည်... ငါတို့ ဘ၀
ငါတို့လယ်ယာသည်... ငါတို့အတိတ် ငါတို့ပစ္စုပ္ပန်
ဇွဲကပင် ခါကာဘိုရာဇီ ၀ိတိုရိယ ပုပ္ပါး
တောင်များသည် ငါတို့၏ အင်အားဖြစ်သည်။
တောများသည် ငါတို့၏ ၀မ်းစာဖြစ်သည်
ဧရာဝတီ စစ်တောင်း ချင်းတွင်း သံလွင်
ဟင်္သာ နဂါး ဒေါင်းငှက်တို့ မြူးပျော်ရွှင်ပါစေ
နိုဝင်ဘာ၊ ၁၅၊ ၂၀၁၃
လက်ပံတောင်း မဟာသူရဲကောင်းအပေါင်းအား ဦးညွှတ်အလေးပြုပါတယ်။ သင်တို့၏ တရားသော ခုခံမှု အောင်ပါစီ..
Posted by Nyein Chan Aung at 3:25:00 PM0comments
လယ်သိမ်း ယာသိမ်း သိမ်းလို့ရတာ အကုန်သိမ်းကြ၏
တောတွေရောင်း ဓါတ်ငွေ့ရောင်း ရောင်းလို့ရတာ အကုန်ရောင်းသည်
တောင်တွေဖြို မြစ်တွေဖြတ် ဖျက်ဆီးရေးဘက်မှာကျွမ်းကျင်သည်
ပြည်ပမီဒီယာများ အိုအိုင်စီ ပိုက်ဆံစား၍ ခွေးလိုအူကြသည်
နေ့တွင်းချင်း ခရိုနီဖြစ်နိုင်သော ခေတ်မကုန်သေး
“အမေခေါ်လျှင်ရှေ့တိုး ဝေဖန်လျှင်ဒိုး” မဟာဗြူဟာအောက်တွင်
“မီးစင်ကြည့်က” ပေါ်လစီချကာ ခရီးဆက်လျှက်ရှိသည်
109-110 သမားများ နိုင်ငံရေးပါတီဝင်ကြသည်
လူထုနှင့်အတူ ကြက်တိုက် ဖဲရိုက်
ကိုလိုနီခေတ်တွင် မြို့ပိုင်များ အိုင်စီအက်စ်များပေါ်ခဲ့သည်
ခေတ်ကွဲသော်လည်း ထိုသူများသည် အတူတူဖြစ်၏
ငြိမ်းချမ်းရေးက စားလို့မရ ကားကမောင်းလို့ရသည်
၂၀၃၀ တိုင်လျှင်လည်း ထူးခြားမည်မဟုတ်
အောက်တိုဘာ၊ ၂၁၊ ၂၀၁၃
Posted by Nyein Chan Aung at 3:22:00 AM 1 comments
ကဲ ဘာလိုသေးလဲ အချစ်ရေ
On the Other Side of Development.
Posted by Nyein Chan Aung at 5:02:00 PM0comments
Obama's Public Speech in Rangoon University
Posted by Nyein Chan Aung at 6:53:00 AM0comments
Posted by Nyein Chan Aung at 3:46:00 AM0comments
Posted by Nyein Chan Aung at 2:16:00 AM0comments
Posted by Nyein Chan Aung at 1:20:00 PM 1 comments
Posted by Nyein Chan Aung at 1:19:00 PM0comments
Daw Aung San Suu Kyi at Queens College in New York City - Part.4
Posted by Nyein Chan Aung at 1:03:00 PM0comments
Daw Aung San Suu Kyi at Queens College in New York City - Part.3
Posted by Nyein Chan Aung at 1:01:00 PM0comments
Daw Aung San Suu Kyi Speech at Queens College in New York City Part 2
Posted by Nyein Chan Aung at 12:54:00 PM0comments
Daw Aung San Suu Kyi at Queens College in New York City - Part.1
Posted by Nyein Chan Aung at 12:53:00 PM0comments
ရာသီဥတုပူသည် တောများအခုတ်ခံလိုက်ရ၍ဖြစ်သ ည် တောင်များကိုမြေတူးစက်မျာြး ဖင့် ဖြိုကြသည် မြစ်များကိုတာဖို့၏ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများနှင့် ပေ...
Ko Htay Kywe at Insein Hospital in 2004. Biography of Ko Htay Kywe: • Born on June 12, 1968 in Rangoon city to the parents of U Kyw...
ဖွတ်နဲ့ပေါင်းတာမဟုတ် ခွပ်ဖို့ချောင်းတာ။ ကောင်းဖို့ရှေ့တိုး ဒေါင်းမျိုးဟေ့။ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ မုချအောင်ရမည် ။..။ ငြိမ်းချမ်းအောင် ဧြ...
Daw Aung San Suu Kyi Meeting With New York Burmese Community
Oxford honours Burma's Suu Kyi
ကျားကလည်း ကျားပဲ နွားကလည်း နွားပဲ အသက်တစ်နှစ်ကြီးခဲ့တယ်..။...။ ၀၁-၀၅-၂၀၁၄ အပြည့်အစုံသို့... ပြန်ခေါက်ထားပါ...
တို့ မေတ္တာစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်း ရေအမြန်ဆုံးကျပါစေ။
Mario Kart Tour210 Crashes Crown / Vs. Mega Dry Bowser Bonus Challenge Walkthrough | Mario ... / Which means it's meow time for the cat tour, starting jan.